Tformlọ Ọrụ Nchọpụta Ọrụ Achọtara Achọta iri na Dubai | Ọrụ - Nlekọta - Ntuziaka Njem maka Mmụta
Dubai, Ebe dị egwu iji nweta Ahụhụ Ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ Oge
Ulo oru di iche iche nke Job Search Platform na Dubai nke na enyere gi aka inweta oru.
Dubai, isi obodo azụmahịa nke A maara United Arab Emirates maka ụdị ndụ okomoko ya, ịdị mma obibi, nchekwa, ihe gbasara nka na nkwekọrịta okpukperechi.
Ọmụmụ ihe dị iche iche dịka nke Insead Alumni Association nke France kwụsịrị Dubai bu obodo mbu n’uwa n’uwa ibi n’iru ma no oru. Dubai abụrụla ụlọ nke abụọ maka ọtụtụ ndị bi na-ebi ma na-arụ ọrụ na mbara igwe na-anabata nnabata a Emirate.
Are na-atụle ịkwaga Dubai maka ọrụ, ebiri na Dubai na ị na-akwado ịkwaga ọrụ gị ọzọ, ka ọ bụ nwa akwụkwọ na-achọ ịbanye ahịa ọrụ?
Lee nyiwe iri ndi a ma ama n'usoro ọ bụla nke ga - enyere gị aka ịchọta ọrụ nro ọzọ na Dubai.
LinkedIn bụ nzukota nka kachasi nma n’uwa dum saịtị na ndị kasị ewu ewu dị ka nke ọma. Dika ebe ikpo okwu di n’igwe, o na ejiko ndi mmadu n’uwa ndị na - abụkarị ndị ọrụ na - achọ ọrụ na ndị na - achọ ọrụ. Iji jiri LinkedIn, ịkwesịrị ịdebanye aha ma wulite profaịlụ gị. Ozugbo emere nke a, ị nwere ike bido sonyere ndị mmadụ. Ọtụtụ mgbe, LinkedIn ga-atụ aro ka ndị mmadụ jikọọ na-adabere na profaịlụ gị. Nye bido ịchọ ọrụ, chọta akara ngosi “ọrụ”, pịnye ebe ọrụ gị na ọnọdụ gị wee malite ịchọ.
Enwere nhọrọ abụọ iji tinye ngwa ngwa: site na LinkedIn na-ejikọta profaịlụ gị zuru ezu na ntinye aka, ma ọ bụ redirection na saịtị mpụga ebe ị nwere ike idebe otu ọrụ ahụ. I nwekwara ike chọta ọrụ na ụlọ ọrụ Ụlọọrụ, Ndị ọrụ enyemaka nke mmadụ, ma ọ bụ na peeji nke Companieslọ ọrụ na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, ha niile na-agbakwunye kọntaktị ozugbo ido onwe ha n'okpuru. Ọrụ a na - akpọ 'LinkedIn Premium' na - enye gị ohere ịkpọtụrụ ụfọdụ ndị na - ewe n'ọrụ ozugbo na na-enye ọhụhụ ọkwa dị elu maka ọrụ ndị etinyere n'ọrụ.
Ọ dịkwa mkpa iwulite netwọkụ ziri ezi na ndị mmadụ nọ n'ọgbọ metụtara gị ma ọ bụ ndị na-etinye ọkwa kwa ụbọchị iji nyere ndị na-achọ ọrụ aka.
Ewezuga ọrụ ịchọ ọrụ, enwere ọtụtụ posts na edemede ndị mmadụ na-ekerịta, ụlọ ọrụ na ndị otu nwere ike ịba uru maka ndụ na ọrụ ha.
Onye Ọkachamara Linkedin na Dubai
N'ezie bu uzo acho oru ndi n’uwa n’uwa dum na-enye usoro ikpo okwu maka ndị were ọrụ iji biputere ọrụ ha, na maka ndị na-achọ ọrụ iji tinye akwụkwọ maka ọrụ ndị a. Ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịdebanye aha na weebụsaịtị ma ọ bụ budata ngwa ha na Google Play na gam akporo ma ọ bụ App Store na ngwaọrụ iOS. Ozugbo ị debanyere aha, a ga-agwa gị ka ị jupụta profaịlụ gị yana bulite CV gị ma ọ bụ maliteghachi. Mgbe nke a gasịrị, ị dịla njikere ma seta itinye akwụkwọ maka ọrụ gị na N'ezie; Ihe ị ga - eme bụ pịa 'Itinye' na profaịlụ gị ga - akpakọrịta onye na - ewe ihe na - akpaghị aka, ma ọ bụ ebugharị gaa na ebe ọrụ ebe Inwere ike itinye akwụkwọ maka otu ọrụ ahụ.
Iji chọta ọrụ ịchọrọ, ịkwesịrị ịchọ okwu na ọnọdụ, yana ọrụ niile dị na otu a ga-egosipụta ma echekwaa onwe gị na ntọala profaịlụ gị maka ọchụchọ dị mfe n'oge ọzọ. N'ezie.com bụ ebe nrụọrụ na-achọ ọrụ n'efu, yana can nwere ike ịchọta ọrụ akpọsara sitere na ngalaba na ọrụ niile. Enwere ngalaba maka nyocha ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịchọta ozi ozugbo na arụmọrụ ụlọ ọrụ ahụ na ahịa ọrụ, ụgwọ ọnwa na emeghe ọrụ.
N'ezie - Ten Popular Job Search Platforms na Dubai
Bayt bu otu n’ime na-eduga n'ọnụ ụzọ ọchụchọ ọrụ ntanetị na Middle East na North Africa. Ikpo okwu a arụpụtala ezigbo ihe ohere iji jikọọ ndị na - agụ ọrụ na ndị na - achọ ọrụ. Onwere oru ndi ozo di iche iche bu nke ekwesiri maka ndi UAE, ndi Freshers / Entry, Mid, Senior na ndi okacha amara, Executive ọrụ na Nkebi ọrụ. Site na ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ ha ma na-aga site na ndebanye aha n'efu, ị nwere ike ịmalite itinye akwụkwọ maka ọrụ. Enwekwara nhọrọ iji wuo CV gi na ntaneti site na nhọrọ nke na-eme ka profaịlụ gị nye ndị ọrụ ọrụ ka ha nwekwuo visibiliti.
Maka ndị na-achọ n'ihi na ọrụ CV ọkachamara ederede, Bayt.com na-enye nke a na ebubo ozugbo na weebụsaịtị ha nwere nhọrọ ịsụgharị gaa na Arabic, tinye Akwụkwọ Ozi mkpuchi ma wuo profaịlụ LinkedIn gị. Na mgbakwunye, enwere ngalaba ngalaba na weebụsaịtị nke na-enye ndụmọdụ na akụrụngwa na ịchọ ọrụ, uto ọrụ na ihe ọmụma banyere ahịa.
Maka ndị na-adịghị achọ ọrụ ozugbo, enwere nhọrọ maka ịdefe CV n'ime nchekwa data Bayt.com nke ndị nwere ike ịbanye na Ụlọ ọrụ nwere ike ịnweta.
Bayt.com - Ten Popular Job Search Platforms na Dubai
Dubizzle bụ na-eduga nhazi ọkwa dị na intanet na UAE. Weebụsaịtị nwere ngalaba 'Ọrụ' ebe ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịchọ ma chọta ọrụ. Ihe ịchọrọ bụ ịdebanye aha maka akaụntụ na Dubizzle, banye, bulite CV gị ma jiri ya dashboard gị iji kwado ọrụ gị. Na mbụ, ọ bụ n'efu ka ndị were n'ọrụ na ndị na - ewe ndị ọrụ na - edebanye ọrụ na saịtị ahụ. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ malitere ọrụ a na-akwụ ụgwọ na nke ahụ, mbipụta ọrụ dị ole na ole, mana enwere ike ijide n'aka ha na-etinye akwụkwọ maka ọrụ dị adị ebe obula achoro uzo ozo banyere nkwenye nke saịtị.
Nwere ike ịchọ ọrụ ọhụrụ kwa ụbọchị site na Companylọ Ọrụ, Ngalaba ma ọ bụ Ọnọdụ maka ọkwa ọrụ niile yana ọrụ Ogologo oge niile. Enwere ngalaba blog na ibe ahụ nwere isiokwu egosipụtara na achọ ọrụ na mmepe ọrụ.
Gulftalent bụ onye na-eweta ọrụ na-achọ ọrụ na-arụ ọrụ dabere na Dubai na na-enye ọrụ na Middle East na Gulf na North Africa mpaghara. Site na ịdebanye aha na weebụsaịtị ha, ị nwere ike bulite CV gị ma wuo profaịlụ Gulf Talent ọkachamara gị n'ịntanetị site na ịnye ozi niile dị mkpa metụtara ọchụchọ ọrụ gị.
Gulf Talent ọ bụghị nanị na-enye ndị ụlọọrụ ikpo okwu iji kpọsaa ọrụ ha kamakwa ọtụtụ ụlọ ọrụ nchịkọta Isi mmalite maka CV nke ndị na-achọ ọrụ (nhọrọ) site na nchekwa data ha. Site na ịdebanye aha, enwere nhọrọ ịnata Mkpanaka ọrụ dị mkpa na nyocha CV n'efu. Ndị na-achọ ọrụ nwekwara ike ịnweta ọrụ ọkachamara CV Writing na profaịlụ na-egosi ọrụ na ụgwọ. Ihe di iche iche di ka akwukwo. enwere ike ịchọta ozi ụgwọ ụgwọ na nyocha ahịa ahịa na weebụsaịtị yana.
Akwụkwọ akụkọ bụ ụzọ ewu ewu iji chọta ozi gbasara ohere ọrụ na Dubai ma na ntanetị ma na mbipụta. Imirikiti akwụkwọ akụkọ na UAE nwere ngalaba arara nye mgbasa ozi arụ ọrụ.
Ebe E Si Nweta: Khaleej Times
Gulf News agụ ga-achọta ohere ọrụ ọhụụ na ibe akwukwo ha na akuko ozi ha na oru ha. Ha online portal getthat.com nwere ngalaba raara onwe ya nye ebe ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịdebanye aha ha ma tinye akwụkwọ maka ọrụ.
Khaleej Times akwụkwọ akụkọ, UAE kasị ogologo na-agba ọsọ English kwa ụbọchị na- na-enye ndepụta ọrụ ọrụ na ngalaba nke mbipụta ya. Buzzon bụ ịzụta ha ma na - ere ọnụ ụzọ ntanetị nke nwekwara ngalaba akọwapụtara maka ịchọta ọrụ. Ebe a, ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịchọta ozi zuru ezu n'ọrụ ọrụ akpọsa na ozi ịkpọtụrụ ka itinye.
Al Waseet dị na ebipụta na ntanetị nwere Ngalaba 'ọrụ' ebe ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịchọta ozi N’asụsụ Bekee na Arabic maka ọrụ ndị a na-enweta gụnyere etu ha na ebe a ga-esi tinye ha.
Na-agụ bụ akwụkwọ akwụkwọ nkwado na-ebipụta kwa izu ma dị na Dubai Metro Stations niile. Yabụ, na njem gị ọzọ na Dubai Metro, ị nwere ike bulie oyiri ma choputa mgbasa ozi ohere oru na 'Classified' peeji nke Reading ma ọ bụ chọta ndụmọdụ gbasara ha n'èzí n'Ịntanet.
Laimoon na-bụ webụsaịtị ọrụ na-ejikọ ndị ọrụ na ndị ọrụ site n’ịhụta ntaramahụhụ nye ndị na-achọ ọrụ n’elu ikpo okwu ha. Ọ bụ saịtị na-akwụ ụgwọ ma ndị ọrụ ma ndị ọrụ, nke di na Dubai nwere ọrụ gafere mba iri atọ. Mgbe ị na-achọ ọrụ ebe a, ọ kachasị mma itinye ndị ụlọ ọrụ 'Laimoon Verified'. Ndị a na-ekwukarị ihe nzuzo mana Laimoon na-enyocha ma nye ikike nye ozi zuru ezu banyere ọrụ gụnyere nkọwa ụgwọ ọnwa.
Laimoon nwekwara a ngalaba raara onwe ya nye maka ọmụmụ ebe ị nwere ike ịchọta ozi na ụlọ ọrụ ndị na-enye ọzụzụ iji bulie onwe gị agụmakwụkwọ. Nhọrọ ọzụzụ ụlọ ọrụ dịkwa na ha webụsaịtị maka otu na ndị ụlọ ọrụ onye ga acho inweta oru a.
Naukrigulf bụ saịtị na-achọ ọrụ nke na-enye ohere na Middle East tumadi na mba Gulf of UAE, Saudi Arabia, Oman, Bahrain na Qatar. Usoro nke ịchọta ọrụ na Naukrigulf.com na-amalite site na ịdenye aha n'efu iji mepụta akaụntụ, wee tinye post Resume gị na ntanetị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ kachasị elu na mpaghara ahụ na-akpọsa maka ọrụ ọrụ na Naukrigulf.com na ya ị nwere ike ịchọ ọrụ gị kachasị amasị gị site na iji akara ya na udi oru, asusu, aha ya, aha ulo or ma o bu ebe igha.
Ebe obibi ha nwere nchịkọta nke Ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị ndụmọdụ, Nchọgharị ndị na-agbanwe ugbu a, na ndụmọdụ gbasara ọrụ. Ha na-enye Resume ide na maliteghari ọrụ ntụpọ na saịtị ha na ego. Enwere ike ibudata ngwa Naukrigulf na Google Play maka gam akporo, yana App Store maka ngwaọrụ iOS.
Monstergulf bụ otu ihe ahụ uzo nyocha nke ndi choro acho na ahia nke UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman na Qatar nakwa ole na ole Asia na Far-Eastern. Site na ịdebanye aha na saịtị ahụ n'efu, enwere ike ijikọ ndị na-achọ ọrụ ma tinye akwụkwọ maka ọrụ ndị dabara na amamihe ha, ahụmịhe ha na ntozu ha. ya na Companieslọ ọrụ dị elu dị na mpaghara ahụ. Monstergulf na-akpọsa maka ọrụ na mpaghara niile maka ọkwa ọrụ niile gụnyere ndị isi na ọrụ Blue-Collar.
Maka ndị ọrụ nlekọta ọrụ Monster, ndị ahịa nwere ike ịkpọ nọmba ha na-akwụghị ụgwọ na UAE na Saudi Arabia ma ọ bụ hapụ nọmba ekwentị ha na weebụsaịtị maka weghachite. Ọrụ enyere esịne Mmemme Resume Writing, Resume Highlighter, na Ihe eji ebu oru na ego.
Ụlọ akwụkwọ na ọrụ ahịa
Itinye akwụkwọ maka internships na ezumike ọrụ bụ ụzọ dị mma maka ụmụ akwụkwọ iji banye n'ahịa ọrụ na UAE ma nweta ahụmịhe ọrụ ha chọrọ iji nwee ike n'ọrụ ha. Enweela ọtụtụ oge ebe a na-enye ndị nọ n'ụlọ ọrụ ohere oge niile na Companieslọ ọrụ dị iche iche ha haziri maka ọrụ na arụmọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ nwere ụzọ ọrụ ebe Companieslọ ọrụ na-akpọsa maka internsagbanyeghị, imirikiti saịtị ọrụ dị na ha na-emekwa otu ihe ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na enwere ụfọdụ Companieslọ ọrụ ndị ị ga - achọ iso, ị nwere ike lelee ngalaba ọrụ nke weebụsaịtị ha maka ohere ime ihe omumu.
Ọrụ na-eme na Dubai
Site n'oge ruo n'oge, enwere ọtụtụ mmemme egwuregwu nke a na-ahazi na UAE ebe ndi n’acho oru na ndi na acho ije agha nwere ike ịga. Na mmemme ndị a, ndị a na-aga ime nwere ike inweta ihe ọmụma gbasara onwe ha Ndị ụlọ ọrụ na-ewe, nkọwa ọrụ yana ozi dị mkpa na netwọk ma zute ndị na-agụ ọrụ ozugbo. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịgba ajụjụ ọnụ na saịtị, dabere na Companylọ Ọrụ ma ọ bụ Ọrụ yabụ jide n'aka na ị ga-eji ejiji ahụ mgbe ị na-aga mmemme ndị a. Offọdụ mmemme dị ka HVACR Careers Fair na ADIPEC Graduate Fairs bụ ụlọ ọrụ na ihe achọrọ maka ya, ọ dị mkpa ịmata ebumnuche nke ihe omume ahụ tupu ịga.
Ihe ngosi Nlekọta Mba na-emeghe nye ndi niile choro ọrụ na ngalaba di iche-iche n’ime UAEagbanyeghị, a chọrọ ndenye aha iji gaa ihe omume ahụ. A na-eme nlezianya maka ngosipụta ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai World Trade Center, ebe ndị isi ụlọ ọrụ dị na UAE bụ ndị na-egosi ihe ngosi. eFair bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ịntanetị na Abu Dhabi nke na-ejikọ ndị na-achọ ọrụ na ndị na-ewe ndị ọrụ. Enwere nhọrọ na Bekee na asụsụ Arabik ịdebanye aha na saịtị ahụ.
Ewezuga usoro ikpo okwu iri na ụzọ a, usoro ọdịnala Okwu-nke-Mouth nwekwara ike gosipụta dị irè na ọrụ gị. Dịka usoro iwu ndụ, ị ga-aghọ onye ị ga-eresị ya na isoro ezi ndị mmadụ ịkparịta ụka ga-arụpụta nsonaazụ kacha elu. Onwere ihe n’enwe onye gha amata nke mmeghe ma obu jikọta gwa gị ka gị na onye ọrụ gị dị mkpa. Soro ndị otu dị mkpa na nyiwe Social Media na-achọ ọrụ metụtara ma sonye na mmemme obodo. Ọrụ afọ ofufo bụ ụzọ dị mma iji bụrụ maka ozi nye obodo na na-enyekwa ohere ịntanetị.
dị iche iche Companieslọ ọrụ ndị na-ewepụta ọrụ dị na Dubai maka ndị na-achọ ọrụ onye ga - achọ iji ọrụ nke ndị ọrụ.
Maka: Ten Popular Job Search Platforms na Dubai
E nwere ọtụtụ akụkọ ihe ịga nke ọma nke expats onye ebidola ọrụ ya nke ọma na Dubai. Akụkọ gị nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ ka mma site na iji Nzọụkwụ ziri ezi ịbanye na ngbanwe ọzọ nke ndụ gị na Dubai. Na-echere gị echiche kacha mma!
Ngwurugwu iri eji achọ ọrụ dị na Dubai, olile anya na amasi ederede anyi ma jisie ike lee onwe gi anya. You matazie otu ị nwere ike isi nweta ọrụ na Obodo nke kachasị n'ụwa ibi na oru.